November 8, 2019 – Voice of Myanmar
ပုသိမ်၊ နိုဝင်ဘာ ၈-၂၀၁၉ ကိုအောင်(VOM) ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ရွှေမြင်တင်ကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ဒီနေ့နံနက်ပိုင်းအစောပိုင်းက ကျောင်းကထိန်ခင်းဖို့လုပ်ထားတဲ့ ပဒေသာပင်က ငွေတွေ(၂၃)သိန်းကျော်ခိုးယူခံခဲ့ရတယ်လို့ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးစီကနေ သိရပါတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းက ဆရာ/ဆရာမတွေ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ ကျေးရွာကအလှူငွေတွေစုပေါင်းပြီး ရွာအတွင်းက နိကြေဓာရုံ ကျောင်းတိုက်က်ိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက် ညဘက် ပဒေသာပင်သီးထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အခိုးခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ ခိုးယူသူက ကျောင်းပင်မဆောင်သံဇကာကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီး ပဒေသာပင် ငွေတွေထဲက၂၃သိန်း၈သောင်း၉ထောင်ကို ယူဆောင်သွားတယ်၊ ကျောင်းစောင့်ဖြစ်သူက နံနက်၂နာရီမှသိခဲ့ရတယ်၊ မနက်ကကျောင်းစောင့်ကဖုန်းဆက်တော့ မယုံနိင်ဘူး တာဝန်ထမ်းဆောင်တာ၉နစ်ရှိပီ ဒီလိုတစ်ခါပဲကြုံဘူးသေးတယ်” လို့ ရွှေမြင်တင်ကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ကြီး ဆရာမဒေါ်ချိုချိုဟန်က ပြောပါတယ်။ ပဒေသာပင်ကငွေတွေ ခိုးယူခံရတဲ့အတွက် ကျောင်းဘက်ကအမှုဖွင့်ထားကာ ဌာနတွင်းစစ်ဆေးမှုများလည်း ပြုလုပ်နေပြီး တရားခံဖမ်းဆီးနိင်ရေးကိုလည်း ပုသိမ်မြို့မရဲစခန်းက စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ #voiceofmyanmar #ပုသိမ် #ပဒေသာပင် #၂၃သိန်းခိုးခံရ Unicode ကြောငျးကထိနျခငျးဖို့လုပျတားတဲ့ ပဒသောပငျက…
ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာ ၈-၂၀၁၉ သိဂီ င်္(VOM) မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ်က မရမ်းကုန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ အ. ထ က. ကျောင်းက ဝရံတာ ပြိုကျတာပြီး ကျောင်းသား ၂၂ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့က VOMသတင်းဌာနကို အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဒဏ်ရာရ ကျောင်းသားတွေကို သထုံဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုပြုလုပ်နေပြီး မိန်းကလေး ယောက်ျားလေး အရေအတွက်ကိုတော့ မသိရှိရသေးပါဘူး။ ” ခုဆေးရုံရောက်တယ် ။ အပ်ဒိတ် ကျောင်းသား ၂၂ ဦးလို့ သိရတယ် ။အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်မှ ပြောပြပေးမယ် ပြန်ဆက်ပေးပါ ” လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့ကပြောပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ဟာ ဒီကနေ့ နိဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းအကျော်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျောင်းပြိုကျရာနေရာကို သွားရောက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ နောင်ဘိုကျေးရွာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းက ကိုစိုးမင်းထိုက်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ” ကျတော်တို့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ချိန်…
အဘူဒါဘီ၊ နိုဝင်ဘာ-၈-၂၀၁၉ မျိုးဆက် (VOM) မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမရှိပဲ ကတိကဝတ်ပျက်တယ်ဆိုပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကန့်ကွက်တာကြောင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒေသတွင်း နိုင်ငံများအဖွဲ့( IORA)မှာ ပါဝင်ရေးလျှောက်ထားမှုဟာ ပယ်ချခံလိုက်ရပါတယ်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအဖွဲ့သည် ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အစိုးရအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ရဲ့(၂၁) ကြိမ်မြောက် ထိပ်တန်းတာရန်ရှိသူတွေ ကောင်စီအစည်းအဝေးကို ယူအေအီးနိုင်ငံ အဘူဒါဘီမှာ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နဲ့ ၆ ရက်တို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုမရှိသလို ကတိကဝတ်တွေကို လိုက်နာတာမျိုးမရှိပဲ နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးပြီးနောက် ပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူးလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က အစည်းအဝေးမှာ ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ(၂၂)နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံ (၉)နိုင်ငံတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီအဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့ လျှောက်ထားတာကို အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအချို့က ထောက်ခံမှုတွေပေးခဲ့ပေမယ့် အဖွဲ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒအရ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေး…
မွန်၊ နိုဝင်ဘာ ၈ – ၂၀၁၉ မင်းရန်နိုင်(VOM) မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့၊ ဘင်လှိုင်ရပ်ကွက်ရှိ အသက်(၁၇)နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူကို ဖခင်အရင်းဖြစ်သူက အဓမ္မအကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်ပြီး ရိုက်နှက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဒီနေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီ အချိန်ခန့်မှာ ဖခင်အရင်းဖြစ်သူ ဦးစိုင်းကျော်ဇော(၄၃)နှစ်၊ (ဘ)ဦးသန်းရွှေနဲ့ သမီးဖြစ်သူတို့ နေအိမ်မှာရှိနေချိန် ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးဖြစ်သူကို နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်းခေါ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ ညစ်ညမ်းခွေ အတင်းပြကာ သားမယားအဖြစ် တစ်ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားချိန်က မိခင်ဖြစ်သူဟာ တောင်ကြီးမြို့ကို ရောက်နေပြီး ဖခင်ကိုကြောက်ရတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြခဲ့ဘူးလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူမှာ ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်အလုပ်နဲ့ ခရီးထွက်လေ့ရှိပြီး ခရီးထွက်ရာမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိတိုင်း မိခင်ဖြစ်သူအလစ်မှာ နေအိမ်အိပ်ခန်းအတွင်း မကြာခဏဝင်ရောက်ပြီး သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ပြီး တားဆေးတိုက်‌လေ့ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၇-၁၁-၂၀၁၉…
ဆိုးလ်၊ နိုဝင်ဘာ-၈-၂၀၁၉ မျိုးဆက် (VOM) သင်္ဘောပေါ်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၁၆ ဦးကိုသတ်ဖြတ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားကို ထွက်ပြေးလာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို မိခင်နိုင်ငံသို့ တောင်ကိုရီးယားက ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားနှစ်ဦးဟာ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က ရေကြောင်းနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်ကိုရီးယားဘက်ကို ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ကာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တောင်ကိုရီးယား အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ မြောက်ကိုရီးယားကပြောင်းလာသူတွေကို အမြဲတမ်းခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့် ဒီကိစ္စမှာတော့ အဲဒီအမျိုးသားနှစ်ဦးဟာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့်လို့ တောင်ကိုရီးယားဘက်ကပြောပါတယ်။ သူတို့ဟာ နိုင်ငံစွန့်ခွာထွက်ပြေးတာတယ်ဆိုခြင်းထက် ရာဇဝတ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့် ပြန်ပို့ရတာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ငါးဖမ်းသင်္ဘောဟာ ရေပိုင်နက်ကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက် သူတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့ တောင်ကိုရီးယား ရေတပ်က အချိန်နှစ်ရက်ယူခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သင်္ဘောကပ္ပတိန်ရဲ့ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ဦးတို့ဟာ ကပ္ပတိန်ကို အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းက သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့…
ချင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝှေ့တင်း အေအေအဖွဲ့က ဖမ်ဆီးထားမှု
Zawgyi ချင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝှေ့တင်းကို အေအေအဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်း ပြောကြားချက်။ ရိုက်ကူး-ကိုထွန်း(VOM) #voiceofmyanmar #နေပြည်တော် #ဦးဝှေ့တင်း Unicode ခငျြးအမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဝှတေ့ငျးကို အအေအေဖှဲ့က ဖမျးဆီးထားတဲ့ကိစ်စနဲ့ပကျသကျပွီး ပွညျထောငျစုလှတျတျော ဒုတိယဥက်ကဌ ဦးထှနျးထှနျးဟိနျး ပွောကွားခကျြ။ ရိုကျကူး-ကိုထှနျး(VOM) ##voiceofmyanmar #နပွေညျတျော #ဦးဝှတေ့ငျး